Dutu radar: chii, chii uye kukosha | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 03/01/2022 09:47 | Mamiriro ekunze
Mazuva ano, nekuda kweruzivo rwemichina inogadzirwa mazuva ese, munhu anogona kufanotaura mamiriro ekunze nekururama uye nemazvo. Imwe yemidziyo yetekinoroji yekuita kufanotaura kwemamiriro ekunze ndeye dutu radar. Sezvinoratidzwa nezita rayo, inogona kutibatsira kufanotaura kuoma kwemakore uye kusagadzikana zvakakwana kukonzera dutu.
Muchikamu chino tichatsanangura zvese zvaunoda kuziva nezvedutu radar, ndeapi maitiro ayo uye zvinobatsira.
1 Chii chinonzi dutu radar
2 Mashandiro anoita Dutu Radar
3 Nhoroondo uye mashandisirwo ekare
4 Kukosha pakuronga ndege
Chii chinonzi dutu radar
Dutu radar chombo chikuru chine shongwe 5 kusvika 10 metres kureba ine denderedzwa dome yakafukidzwa nemuchena. Kune akati wandei zvinhu (antennas, switch, transmitters, vanogamuchira ...) izvo zvinogadzira radar yeiyi dome pachayo.
Iyo radar's pachayo inoshanda maseketi inobvumira kufungidzira kugovera uye kusimba kwemvura, ingave yakasimba (chando kana chimvuramabwe) kana muchimiro chemvura (mvura). Izvi zvakakosha pakuongorora uye kuongorora mamiriro ekunze, kunyanya mumamiriro ezvinhu akaomarara, akadai semadutu akanyanya kana kunaya kwemvura, uko kune mabhandi akasimba uye akadzikama emvura, ndiko kuti, kana mvura zhinji inoungana munzvimbo imwe chete. nguva pfupi.
Mashandiro anoita Dutu Radar
Iyo yekushandisa musimboti wedutu radar yakavakirwa pakuburitswa kwemicrowave-mhando mwaranzi. Aya matanda kana mapurusi emwaranzi anofamba mumhepo ari muchimiro chezvimedu zvakati wandei. Apo kuputika kunosangana nechipingamupinyi, chikamu chemwaranzi inobudiswa inopararira (yakapararira) kumativi ose uye chikamu chinoratidzwa kumativi ose. Chikamu chemwaranzi chinoratidzwa uye chinoparadzirwa munzira yeradar ndicho chiratidzo chekupedzisira chaunogamuchira.
Maitiro acho anosanganisira kuitisa akawanda mapulses emwaranzi, kutanga nekuisa radar antenna pane imwe nzvimbo yekukwira. Kana iyo antenna yekukwira yaiswa, inotanga kutenderera. Kana antenna ichitenderera yega, inoburitsa pulses yemwaranzi.
Mushure mekunge antenna yapedza rwendo rwayo, maitiro akafanana anoitwa kusimudza antenna kune imwe kona, uye zvichingodaro, kuwana imwe nhamba yemakona ekusimudza. Aya ndiwo mawaniro aunodaidzwa kuti polar radar data - seti yedata radar iri pasi uye kumusoro mudenga.
Chigumisiro chemuitiro wose Inonzi spatial scan uye inotora maminitsi gumi kuti ipere. Hunhu hweiyo yakaburitswa radiation pulses ndeyekuti inofanirwa kunge ine simba rakawanda, nekuti mazhinji emagetsi anoburitswa anorasika uye chikamu chidiki chechiratidzo chinogamuchirwa.
Imwe neimwe nzvimbo scanner inoburitsa mufananidzo, unofanirwa kugadziriswa usati washandiswa. Ichi chifananidzo chekugadzirisa chinosanganisira kugadzirisa kwakasiyana-siyana, kusanganisira kubviswa kwepasi kwakagadzirwa zviratidzo zvenhema, ndiko kuti, kubviswa kwegomo kwakagadzirwa zviratidzo zvenhema. Kubva pane zvese zvakatsanangurwa pamusoro, mufananidzo unogadzirwa unoratidza iyo reflectivity munda we radar. Reflectivity chiyero chehukuru hwekupa kwesimba remagetsi kune radar kubva kudonhwe rega rega.
Nhoroondo uye mashandisirwo ekare
Kusati kwagadzirwa radar yemvura, mamiriro ekunze aiverengwa pachishandiswa masvomhu, uye vanoongorora nezvemamiriro ekunze vaigona kushandisa masvomhu equation kufanotaura mamiriro ekunze. Mumakore ekuma1940, radar dzaishandiswa kuona vavengi muHondo Yenyika II; maradhi aya aiwanzoona zviratidzo zvisingazivikanwi, izvo zvatiri kudana zvino Yufeng. Mushure mehondo, masayendisiti akaziva chishandiso uye akachishandura kuita icho chatinoziva semvura uye / kana kunaya kweradar.
Storm radar shanduko yemamiriro ekunze: pinobvumira masangano makuru emamiriro ekunze kuwana ruzivo rwekufanotaura, Uye iwe unogona zvakare kunzwisisa kumberi mafambiro egore, pamwe negwara raro uye chimiro. , Mwero uye mukana wekukonzera kunaya.
Tsanangudzo yekufanotaura iyo radar yemvura inopa yakaoma, nokuti kunyange zvazvo iri mberi munharaunda yemeteorological, radar haipei data chaiyo iri kure, uye zvakaoma kuziva nzvimbo chaiyo yemamiriro ekunze. Uyu ndiwo mutauro unotaurwa.
Kuita kufanotaura kwakanyatsojeka, meteorologists vanoongorora zvinogoneka kuenda mberi. Kana chiedza chezuva charova makore, kuwanda kwemafungu emagetsi emagetsi anobuda kune radar anochinja, zvichiita kuti tinzwisise maitiro emvura anogona kuitika.
Kana shanduko yakanaka, nzira dzepamberi uye mukana wekunaya kwemvura uchawedzera; kana zvisina kudaro, kana shanduko isina kunaka, kumberi kunodzikira uye mukana wekunaya unoderera. Kana ruzivo rwese runobva paradar rwaendeswa kumufananidzo wekombuta, kunaya kwemvura kumberi kunozoiswa muchikamu zvichienderana nekuwanda kwemvura, chimvuramabwe kana chando ... Rudzi rwemavara rwunopihwa kubva kutsvuku kuenda kublue zvichienderana nekusimba kwemvura. .
Kukosha pakuronga ndege
Chinhu chekutanga kutaura ndechekuti mamiriro ekunze radar chishandiso chekutarisa, kwete chekufanotaura, saka inotiratidza. mamiriro emvura (kutsvaira) kana data yaunganidzwa.
Nekudaro, nekuona kuti kuwanda kwemvura kunoshanduka sei nekufamba kwenguva, tinogona "kufanotaura" maitiro ayo emangwana: icharamba iripo here? Ichafamba nenzira yedu here? Zvinotonyanya kukosha, tinogona kuronga ndege kuti tidzivise nzvimbo dzine madutu makuru uye kunaya kwemvura?
Iyo data yakaunganidzwa neradar inoratidzwa mune akasiyana mafomati ekuratidzira. Tevere, isu tichatsanangura maviri akanyanya kukosha maficha ekuronga ndege uye nekutarisa kune zvimwe zvemukati izvo iwo zvakare anotorwa kubva kuDoppler radar zviyero.
Sezvauri kuona, dutu radar rinobatsira pakufanotaura kwemamiriro ekunze uye rinogona kutibatsira nekuronga ndege. Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezvedutu radar uye maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Mamiriro ekunze » Dutu radar